Accueil > Gazetin'ny nosy > Ambatofinandrahana : Notapahina ny tambazotram-pifandraisana
Ambatofinandrahana : Notapahina ny tambazotram-pifandraisana
Tao anatin’ny telo andro izao dia notapahina ny fifandraisana tamin’ny tambazotra ny orinasa Airtel sy Telma ary Orange tany amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana. Izany dia nanomboka ny talata faha 30 aprily 2019 ka hatramin’ny omaly 02 may 2019.
Ny antony hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana dia ny fisian’ny ady amin’ny asan-dahalo. Mba hialana amin’ny fifandraisan’ny dahalo amin’ny namany izay mipetraka ao Ambatofinandrahana izay manome azy ireo ny làlana loharanom-baovao handehanan’ireo miaramila manao “opération” amin’ny ady amin’ny tsy fandriam-pahalemana ireo. Hialana ihany koa amin’ny pôlisy sy ny zandary any an-toerana izay mifandray amin’ireo dahalo ireo. Marihina fa misy mihitsy ny zandary izay manao velirano amin’ny dahalo toa ny nitranga tany Amborompotsy tamin’ny taona lasa iny izay nahitana zandary telo lahy miray tsikombakomba amin’ireo dahalo ireo koa. Izany no antony nahatonga ny fanapahana tambazotram-pifandraisana amin’ny finday.
Nisy ny vokatra azo tamin’izany, hoy ny loharanom-baovao. Hatramin’izao aloha dia efa azo lazaina fa misy fandrosoana
ny fandriam-pahalemana any amin’ny distrikan’Ambatofinandrahana. Misy izany antsoina hoe “zaza mena” izany koa manampy ireo mpitandro filaminana amin’ny ady amin’ny dahalo. Izy ireo no isan’ny manoro ny toerana fiarian’ny dahalo. Misy aza no milaza fa dahalo niova fo izy ireto.
Misy basy maro azon’ny mpitandro filaminana any Ambatofinandrahana amin’izao fotoana izao.
Raha mitohy ny ady amin’ny dahalo ataon’ny mpitandro filaminana izao dia azo lazaina fa hihatsara ny tsy fandriam-pahalemana any amin’ity distrika ity sy ny faritra manodidina azy.